ဝတ်စုံချုပ်သူရဲ့ချုပ် – အဆိုပါ Tailoress
ဧပြီလ 11, 2015 | အထူးပြောစရာမရှိ | Dressmaker's Stitches, ချုပ်
ပြင်သစ်ထုံးတစ်ဦးကအလှဆင်ချုပ်. ချည် Secure နှင့်ထည်၏ညာဘက်အခြမ်းမှဆေးထိုးအပ်ကိုဆွဲ. အပ်ရိုးပတ်ပတ်လည်လှည့်ကွက်ချည်နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုကြိမ်, (သင်လုပ်ချင်တဲ့ထုံး၏အရွယ်အစားပေါ်တွင် မူတည်. ပြောင်းလဲ) ပြီးတော့, အပ်အပေါ်ကွင်းကိုင်ပြီး, take the needle down very close to the point you […]
ပြင်သစ်မြင်းစီးခြင်းဆက်စပ်ပစ္စည်းဒါ့အပြင်တစ်ဦး '' ချည်မျှင်ကွင်းဆက် '' ဟုခေါ်တွင်. ထိထိရောက်ရောက်အတူတူအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းအပိုင်းကိုင်ဖို့အသုံးပြု. ဒါဟာချည်ဘားထက်လျော့နည်းတာရှည်ခံသည်, အစားပျော့ပြောင်းပြီးဖြစ်ခြင်း. သူတို့ကအတူတကွအလွှာကိုင်ဆောင်မှုအတွက်သင့်လျော်သောများမှာ, ထိုကဲ့သို့သောအင်္ကျီကိုလှီးအလွှာအဖြစ်. သူတို့ကအရှည်အတွက်သာမန်အားဖြင့် 1-5cm များမှာ. ချိတ်အဘို့မျက်စိဖနျတီးဖို့လည်းသုံးနိုင်တယ်. French tacks are hand-crocheted […]
အ overhand ချုပ်ရန်အလွန်ဆင်တူနှင်တံပူးတွဲလိုက်ပါ. အားကြီးသောမမြင်ရတဲ့ချုပ်ရိုးလိုအပ် hems သို့မဟုတ်အခြားစီမံကိန်းများ secure ဖို့အဲဒါကိုအသုံးပြုပါ. တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်ကချုပ်ရိုးနှင့်မစောင်းတစ်ဖြတ်ပြီးတစ်ဖြောင့်ချုပ်ဖန်တီးဖြစ်ပါတယ်. လက်ျာဘက်လက်ဝဲဘက်သို့အလုပ်မလုပ်, အတူတူနီးစပ်ချုပ်စ​​ောင့်ရှောက်ခြင်း. Place the folded and pressed seam-lines to be joined […]
ဧပြီလ 11, 2015 | အထူးပြောစရာမရှိ | Dressmaker's Stitches, ချုပ်, Tailor's Stitches
ထိပ်တန်းအလှဆင်မြန်းအလှဆင်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်လည်းပြားချပ်ချပ်ချုပ်ရိုးကိုင်ဖို့ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကိုပေါ်လွင်ရန်, ကော်လာနှင့်ထိုးတူ. သူတို့ရဲ့သမာဓိကိုခိုင်ခံ့စေခြင်းနှင့်ထိနျးသိမျးလည်းကူညီပေးသည်. တစ်ပိုလေးချည်မျှင်ကို အသုံးပြု. Create (အထူးသဖြင့်ထိပ်တန်းချုပ်အဘို့အချည်ရရှိနိုင်ပါသည်). သာမန်ထက်ပိုရှည်ချုပ်သုံးပြီးအစွန်းမှ 6mm ပတ်သက်. ထိပ်တန်းချုပ်စ​​တင်ဖို့.
စိတ်ဖိစီးမှုများသည့်နေရာများတွင်အားဖြည့်ဖို့ Bar ကိုအသုံးပြုခြင်း Threading, ထိုကဲ့သို့သော pleat အချက်များနှင့်ဇစ်၏အောက်ခြေတွင်အဖြစ်. button ကိုကွင်းအဖြစ်အသုံးပြုရန်လည်းဖန်တီးနိုင်, (တစ်ဦးချည်ကွင်းဆက်အဖြစ်လူသိများ). အောင်, လိုအပ်တဲ့အရပျ၌ချည်အတော်ကြာ strands ကျောက်ချရပ်နား. စောင်ချုပ်သို့မဟုတ် button ကိုပေါက်ချုပ်နှင့်အတူအဖုံးဖုံး.
ထိုးနှက်မှုတစ်ခုချုပ်ထူသောအထည်ပူးပေါင်းဘို့အသုံးပြုထားတဲ့, အိတ်ကပ်, ခလုတ်တွင်းဖန်တီးခြင်းနှင့်ပခုံး pads ထည့်. လက်ျာဘက်၌ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်မဖြစ်အောင်ချုပ်တွေဖန်တီးလိုက်တဲ့. လက်ျာဘက်လက်ဝဲဘက်သို့အလုပ်မလုပ်. ဒေါင်လိုက်ချထည်တဆင့်ဆေးထိုးအပ်ကိုယူနှင့်နားလည်မှဆွဲ. ထိုအခါထည်သော်လည်းဒေါင်လိုက်အထက်သို့အပ်ယူ. Formasmall stitch by taking the […]